COVID-19 hitondra zavadoza any amin’ireo fonja hipoka ao Brezila, efa nisy iray maty · Global Voices teny Malagasy
Toerana 300.000 no ilaina any anaty fonja ao Brezila
Voadika ny 29 Avrily 2020 6:11 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Italiano, русский, عربي, Français, Ελληνικά, polski, English
Fonja ambanivohitr'i Monte Cristo, any amin'ny fanjakàna avaratra ao Roraima, Brezila. Sary: Luiz Silveira, CNJ Agency. Nahazoana alàlana.
Ny 17 Aprily teo no nahitàna ny fahafatesana voalohany vokatry ny COVID-19 tany am-ponjan'i Brezila, niteraka tahotra hoe mety handravarava ny rafitra famonjàna ao amin'ny firenena efa hipoka sy tsy ara-pahasalamàna ary midadasika – ny fahatelo lehibe indrindra eto an-tany, raha ny marina.
Raha ny voalazan'ny Departemantam-panjakàna ao Brezila miandraikitra ny Fonja, hatramin'ny Aprily dia nisy 125 ireo tranga nampiahiahy ho COVID-19 tany amin'ireo fonja ao Brezila. Ny 31 Martsa, niisa 74 ireo tranga nampiahiahy. Ny 9 Aprily no hita ireo tranga telo voalohany voamarina tamin'ilay aretina tany anatin'ny rafitry ny fonja.
Tamin'ny 20 Aprily, 2.575 ny fahafatesana ary 40.000 ny trangana COVID-19 voamarina tao Brezila, raha ny voalazan'ny minisitry ny fahasalamàna ao amin'ny firenena. Mety mbola ho avo be noho io ny isa satria tena voafetra ny fahafahana manao fitiliana.
Ny fandalinana iray nataon'ny “Imperial College London” navoaka tany amin'ny faramparan'ny Martsa dia manombana ho olona eo anelanelan'ny 44.000 (raha ampiharina ny fihibohana) sy 1,1 tapitrisa (raha tsy asiana faneriterena) no mety ho fatin'ilay aretina ao Brezila, firenena misy mponina 210 tapitrisa.
Efa hatry ny ela ny rafitra famonjàna ao Brezila no nizaka fanakianana noho ireo fepetra iainana any tsy ara-pahasalamàna sy noho izy tototra be. Zavatra mahazatra ny fanafihan'ny kongona, hatramin'ny tsy fahampian'ireo vokatra entina manadio sy mikarakara ny fahasalamàna – 31 isanjato amin'ireo fonja ao amin'ny firenena no tsy manana toerana natao ho an'ny mpitsabo any anatiny any, araka ny lazain'ny angondrakitry ny biraon'ny fampanoavana, voarain'ny gazety “Folha de S. Paulo”. Tombanan'ireo manampahaizana manokana ho misy fahabangan-toerana 300.000 any anaty rafitra manontolo misahana ny ny fonja.
Ny Prison Pastoral (Pastoral Carcerária), rantsana iray ao anatin'ny fiangonana katôlika manome tohana ara-tsôsialy, araka ny lalàna ary ara-pahasalamàna ho an'ireo fonja ao Brezila, dia nanao fanadihadiana iray momba ilay coronavirus vaovao, niarahany tamin'ireo mpiasany, ny fianakavian'ny mpifonja, ny mpiasa ao amin'ny fonja, ny mpisolovava, ny mpitsara, ireo voampanga ary ireo mpikambana anaty fikambanana sôsialy. Ny 9 Aprily no navoaka ny famintinan-dry zareo:
olona 377 (31,35 isanjato) namaly hoe eny, misy ny tranga mampiahiahy amin'ny valanaretina coronavirus any am-ponja, raha 207 (17,2 isanjato) kosa milaza fa tsy misy. Olona 621 (51,5 isanjato) no tsy mahafantatra izay havaliny na misy na tsia ireny tranga ireny.
Momba ireo tranga voamarina, olona 245 (20,4 isanjato) no nilaza fa nahafantatra olona ao anatin'ny rafitry ny fonja tratr'ilay coronavirus vaovao, raha 222 (18,5 isanjato) nilaza fa tsy mahafantatra tranga mivaingana. Izao indray, olona maro no namaly fa tsy mahita izay havaly an'ilay fanontaniana: 736, na 61,2 isanjato.
Ny minisitry ny fitsaràna sy ny filaminam-bahoaka, Sergio Moro, ilay mpitsara federaly teo aloha lasa malaza be noho ny nitarihany ny hetsika “Car Wash”, niteny tamin'ny 13 Aprily fa “voafehy ny zavatra rehetra” any anatin'ireo fonja ao Brezila. Tamin'ny Martsa, nanome toky ny vahoaka izy hoe ‘tsy misy tokony hatahorana tsy amin'antony [rehefa ny] fonja [ no resahana]”, ary nampiany hoe:
Misy tontolo iainana azo antoka ihany ao anatin'ny rafitry ny fonja raha momba ny coronavirus, noho ny fepetra efa tena fanokana-monina an'ireo mpifonja.
Ny fonja Porto Alegre, Rio Grande do Sul any atsimon'i Brezila. Sary: Luiz Silveira, CNJ Agency. Nahazoana alàlana.
Efa hatry ny ela no mizaka fiparitahan'aretina ny fonja ao Brezila. Araka ny tatitra nataon'ny Agência Pública, media iray tsy mitady tombontsoa ara-bola ao Brezila, nisy maherin'ny 10.000 ny tranganà raboka voamarina tany amin'ireo fonja tao amin'ny firenena tamin'ny 2018. Midika izany fa nisy 1.400 mahery isaky ny olona 100.000 tao am-ponja ny trangan'aretina hita – raha tety ivelany, tsy nisy afa-tsy 40 isaky ny 100.000 tamin'ny fotoana nanaovana ny fikarohana.
Ny profesora Carla Machado, avy ao amin'ny Oniversite federaly Minas Gerais, izay noantsafaina tato anatin'ny lahatsoratra, milaza fa resaka fotoana fotsiny io mandra-panomboky ny fiparitahan'ilay coronavirus vaovao amin'ny fomba tsy hay fehezina any anaty rafitry ny fonja. Ny mpiaramiasa aminy, profesora sady fizisiàna, Dirceu Greco, nanampy hoe:
Ny fahafenoana be loatra dia mamorona ireo fepetra lafatra ho an'izay otrikaretina rehetra afaka mifindra amin'ny alàlan'ny rivotra. Ny tsy fahampian'ny fitaovana dia mbola singa iray hafa: tsy manana rano sy savony ny olona. Ary, mazava loatra, ny tsy fahampian'ny fikarakaràna ara-pahasalamàna, infirmiera sy ny tohana ara-tsosialy.
Mba hisorohana toejavatra mahafaty tahaka izany, saika ireo governora rehetra any amin'ireo fanjakana miisa 26 sy distrika federaly ao Brezila no nanaiky ny fitazonana an-trano ho an'ireo mpigadra iharan'ny “rafitra noalalahana” (karazana fanagadràna izay ahafahan'ny mpigadra mivoaka mandeha miasa saingy miverina matory any am-ponja kosa), ary ho an'ireo tafitra anatin'ny sokajin'ny vondrona marefo.
Noraràn-dry zareo ihany koa ny fitsidihana rehetra sy ny fanaterana sakafo sy fitaovana fidiovana avy amin'ny fianakaviana. Tany am-piandohana, niteraka fitroarana teny anivon'ireo mpifonja izany fepetra izany – an-jatony ireo nandositra ny fonja iray tao São Paulo tamin'ny 16 Martsa – satria marobe ireo fonja breziliàna no miantehitra amin'ireo zavatra aterin'ny fianakaviana akaikin'ireo mpifonja. Tao anaty fanambaràna iray, nohelohin'ny Prison Pastoral ny nanomezan'ireo fonja any amin'ny fanjakàna avaratra ao Amazonas sakafo efa lò ho an'ireo voafonja, ary nampiany hoe:
Manontany izahay: ahoana no hisorohanareo aretina tsy hiditra any amin'ny fonja, toy ny coronavirus, na ahoana no hampihenana ny soritraretina – na hanomezana làlana ny fahasitranana – raha tsy ara-pahasalamana ny sakafo, ny fahadiovana ary tsy misy vokatra entina manadio?
Fampidirana am-ponja tafahoatra
Hatrizay i Brezila no efa sahirana mikaroka izay ho sazy fanolo ny famaizana heloka mba hampitsaharana ny fitomboana tafahoatra ny olona any am-ponja. Miaraka amin'ny fisian'ilay valanaretina, ho fisorohana ny zavadoza, dia anisan'ny hafatrafatra nataon'ny Filankevitra Nasiônalin'ny Fitsaràna (CNJ) ireo fepetra tahaka ny famerenana manombana indray ireo fisamborana ho fisorohana — olona 253.963 amini'izao fotoana izao no any am-ponja tsy mbola nandalo fitsaràna.
Antitranterin'ny naoty iray nalefan'ny “Criminal Justice Network (Rede Justiça Criminal)“, vondrona iray iarahan'ireo fikambanana marobe, ny lanjan'ny fandraisana fepetra fitandroana:
Ny fitomboana be mampiahiahy amin'ilay trangana coronavirus vaovao, manerantany, dia mampiseho ny halalin'ny faharefoana sôsialy, ara-poko sy toekarena ao Brezila. Any am-ponja, tena vao mainka miha-ratsy dia ratsy ny toedraharaha.